सन्दर्भ पच्चीसौं जनयुद्ध दिवस: “अब जनयुद्ध दिवस हैन, सहिद स्मृति दिवस” नेकपा कञ्चनपुर अध्यक्ष वीर बहादुर थापा – Hamrai Sajha Patrika
सन्दर्भ पच्चीसौं जनयुद्ध दिवस: “अब जनयुद्ध दिवस हैन, सहिद स्मृति दिवस” नेकपा कञ्चनपुर अध्यक्ष वीर बहादुर थापा
By सुनिलकुमार लो	 Last updated Feb 13, 2020
पच्चीसौं जनयुद्धको अवसरमा हाम्रै साझा पत्रिकाले “जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहादत हुनुभएका सहिदहरुले सोचे अनुरुप देश अगाडी बढिरहेको छ त ?” भनेर नेकपाका नेता, जनयुद्धका लडाकु तथा सहिद परीवारलाई प्रश्न राखेका थियौं । उहाँहरुको विचार तल राखेका छौ ।
नेकपा कञ्चनपुर अध्यक्ष वीर बहादुर थापा
“हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाको समय र वर्तमान समय बदलिएको छ । त्यसैले जनयुद्ध गर्दाको जस्तो सोच अहिले हामीले राख्नुहुँदैन । हिजो नेकपा माओवादी मात्र हुँदा जनयुद्ध दिवस मनाईन्थ्यो तर तत्कालीन एमालेसंग पार्टी गठन भैसकेको अवस्था छ । अब जनयुद्ध दिवस हैन कि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र देशमा गणतन्त्र ल्याउने क्रममा सहादत प्राप्त गरेका ज्ञात अज्ञात सबै सहिदहरुलाई समेट्न सहिद स्मृति दिवस मनाउने पार्टीले निर्णय गरेकाले हामीले सोही अनुसार गर्दै छौ ।जनयुद्ध र जनआन्दोलन गर्दै गर्दा जनताको जुन प्रकारको अपेक्षा थियो, केही त सम्बोधन भैइसक्यो भने केही काम पुरा गर्न अझै बाँकी छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने दिशामा पार्टी अगाडि बढिरहेको हुनाले सर्वासाधारण जनता, सहिद परीवार, वेपत्ता परीवार र घाइतेहरुको आर्थिक व्यवस्थापन र रोजिरोटीको सवालमा कता कता पार्टीले केहि गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । राजनीतिक आन्दोलनको एउटा पाटो पूरा भैसकेको छ र यस पछि पार्टीको समग्र ध्यान सम्पूर्ण शोषित पीडितहरुकै हितमा जानेछ ।”
नेकपा सुदुरपश्चिम प्रदेश सदस्य रामचन्द्र नेपाल
सहिदहरुको सम्मानमा केही कामहरु भएका छ्न । तर घाइतेहरुको सन्दर्भमा खासै राज्यको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।राज्यले पैसामात्र बाँडेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसको लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन पीडितहरुलाई सीप सम्बन्धि तालिमहरु दिएर स्वरोजगार बनाउनु पर्छ । तर यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा होमिएका सहिदहरुका सपनाहरु वर्तमान राज्यसंयन्त्रले पूरा गर्न सकेको छैन । उहाँहरुको अपेक्षा ठूलो छ भने राज्यको श्रोत सिमित छ । र कार्यान्वयन पक्षपनि फितलो देखिन्छ । यी कारणहरुले गर्दा सहिद परीवार, घाईते अपांग परीवारका चाहनाहरु पूरा भएका छैनन ।
जनयुद्धका लडाकु राम बहादुर देवकर(रक्तबिज)
जनयुद्धको पच्चीसौ वार्षिकोत्सव मनाईरहँदा आफुले भनेजस्तो नभएपछि जनयुद्धमा प्रत्यक्ष लागेका र सर्वसाधारण जनतामा नैराश्यताको भावना आउनु स्वभाविक हो । तर अहिले जुन परीवर्तन आएको छ, त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै बलले आएको कुरा जनताले बिर्सनु हुदैन । तर अर्कोतिर जनताका जनजिविकाका सवालहरु र आधारभूत आवश्यकताहरु तथा सामाजमा वर्ग रहिरहन्छ, अन्तरद्वन्द्व रहिरहन्छ भने क्रान्ति कहिले समाप्त हुँदैन । नयाँ रुपमा पुनरआगमन हुन्छ ।
पवन बि.क.(सहिद रामकुमार बि.क.का छोरा)
निश्चित रुपमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरु भएका छ्न । तर जनताको जीवनस्तर उठाउने सवालमा, सहिद परीवार,बेपत्ता परीवार र घाइते परीवारको जिम्मेवारी वहन गर्ने सवालमा राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपा माओवादी मात्र हुँदा केही हदसम्म सहिद, बेपत्ता र घाइते परीवारको मुद्दामा कुरा उठथ्यो तर अहिले पार्टी एकीकरण भैसकेपछीको अवस्थामा यसबारेमा कुरा हुनै छाडेको छ ।
पच्चीसौं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेकपा पुनर्वासद्वारा “सहिद स्मृति दिवस”को आयोजना
नेपाली दर्शकश्रोताको माया पाएका छौं : राम कँडेल
नेपालभारत सीमा नाका कति दिन बन्द हुने ?
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, अष्ट्रेलिया शाखाको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२
समिक्षा अधिकारीको ‘केटो अलि कमाउने होस’, युट्युवमा सार्वजनिक ! २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२
मिर्गौला पीडित श्याम रौनियारलाई सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाजद्वारा आर्थिक सहयोग २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२
आजको राशिफल/आज मिति २०७७ मङ्सिर ८ गते सोमबार २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२
शिरीष गौतमद्वारा अभिनित मनै छुने शब्दसंगीत भएको म्युजिकभिडियो “मेशिन बन्नुपर्छ” युट्युवमा सार्वजनिक २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२
२०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
२०७५, २७ चैत्र बुधबार ०६:२९